नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सा शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीलाई जुम्लामा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनमा सरकारले बन्देज लगाएको जनाउँदै भर्त्सना गरेको छ ।
घुँडाको पीडा: सामान्य शल्यक्रियापछि हराउन सक्छ
उठ्दा वा बस्दा घुँडा दुख्छ ? हिँडदा पो पीडा हुन्छ कि ? यस्तो हुन्छ भने तपाईंको घुँडाको कार्टिलेज पातलो भएको हो । कार्टिलेज भित्रभित्रै घिसिँदाघिसिँदा पातलो हुँदै जान्छ । अनि खाली ठाउँ (ग्याप) कम भएर खुट्टा बांगोटेढो हुन्छ अनि दुख्छ ।
रजोनिवृत्तिपछि क्यान्सरको जोखिम घटाउन भिटामिन ‘डी’
खानपान वा अन्य उपायले भिटामिन ‘डी’ को मात्रा बढाउँदा रजोनिवृत्तिपछि हुने स्तन क्यान्सरको जोखिम कम हुन सक्छ ।
फ्लाइटको क्रु मेम्बरलाई क्यान्सर हुने आशंका बढी
हालैको एउटा अध्ययनमा दाबी गरिएअनुसार, फ्लाइटमा क्रु मेम्बरलाई क्यान्सर हुने खतरा औसतभन्दा धेरै बढी हुन्छ ।
धार्मिक प्रवृत्तिका व्यक्ति नास्तिकभन्दा चार वर्ष बढी बाँच्छन्
नास्तिक अर्थात् धर्ममा रुचि नराख्ने व्यक्तिको तुलना धार्मिक प्रवृत्तिका व्यक्ति औसत रूपमा चार वर्ष बढी बाँच्छन् ।
जसको साथी बढी, उसकै मस्तिष्क बढी फिट
एउटा अनुसन्धानअनुसार, बढी साथी हुनाले र सामाजिक दायरा बढ्नाले मस्तिष्कमा उमेरको असर ढिलो पर्ने गर्छ, दिमाग सुरक्षित रहन्छ र जीवनस्तरमा सुधार आउँछ ।
अहिले तराईमा जामुनको मौसम छ । गर्मी र वर्षा याममा हुने मौसमी फल जामुन खानामा स्वादिष्ट मात्र हुँदैन यसमा थुप्रै प्रकारका औषधीय गुणसमेत पाइन्छन् । यो फल नियमित खाँदा थुप्रै रोगसँग लड्ने क्षमता प्राप्त हुन्छ ।